RW Cabdi Weli: Waan kala hadlnay Kenya ineysan qaxootiga qasbin – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, 22 June, 2014 — Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo oo baryihii u dambeeyay safar shaqo ku joogay Kenya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, waxaana kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho masuuliyiin ka socday labada gole ee dowladda.
Ra’iisul Wasaare Cabdiwali oo saxaafadda kula hadlay garoonka Aaden Cadde ayaa faah faahin ka bixiyay kulamo uu la qaatay madaxda ka tirsan dowladda Kenya iyo wakiilo ka kala socda Hay’ado caalami ah.
Ujeedka safarka Ra’iisul Wasaaraha ee magaalada Nairobi ayaa ahayd ka qeyb galka kulanka 99-aad ee dalalka ku bohoobay African, Caribbean, and Pacific Group of States, laguna soo gaabiyo (ACP) kaasoo ka dhacay magaalada Nairobi.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Nairobi wuxuu saxiixay hedshiis dhexmaray Midowga Yurub iyo Soomaaliya, heshiiskan ayaa daba socda marki dhawaan Soomaaliya loo ogolaaday ka mid noqoshada Heshiiska Continuo.
Kenya ayaa horay si qasab ah Soomaaliya ugu dhoofisay ilaa saddex qaxooti Soomaali ah oo dalkeeda ku noolaa, iyadoo dhanka kalana xeryhaha qaxootiga qasab ku geysay kumanaan kale.